SAWIRO:-Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed oo shir uga furmay Baydhabo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed oo shir uga furmay Baydhabo
SAWIRO:-Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed oo shir uga furmay Baydhabo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed laftagareen ayaa Baydhabo Maanta ka furey Shir looga hadlayo Arrimo dhowr ah oo ku saabsan Maamulada Hir-Shabelele iyo Koonfur Galbeed.
Shirkaan oo ay Goobjoog ka yihiin Madaxweynayaasha labada Maamul iyo mas’uuliyiin kale ayaa waxaa soo qaban qaabiyey Wasaaradda Qosheynta Koonfur Galbeed & Midowga Yurub,waxaana diirada lagu saarayaa horumarinta Maamulada Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed,isla markaana Shirka ay kaalin weyn ka qaadan doonaan Safiiro ka socda wadamada Midowga Yurub.
Mid kamid ah Safiirada Midowga Yurub ee shirka ka qeyb-galaya ayaa sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin inay dowlad Goboleedyada ka caawiyaan wixii ku saabsan arrimaha Amniga iyo horumarka.
Shirkaan oo socon doona muddo hal maalin ah ayaa waxaa la filayaa in geb-gabada laga soo saaro warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii laga hadley ee dhinaca horumarka iyo iskaashiga ka hortegida fatahaada Wabiga Shabeelle.
Previous articleDhimasho & dhaawac ka dhashay dagaal ka socda Galgaduud
Next articleShirkadda DP World oo ka guuleysatay Jabuuti
Shir looga hadlayo Arrimaha fatahaadaha & Abaaraha oo Muqdisho ka socda
Dhageyso:-Maxaa keenay dib u dhaca ku yimid Magacaabista Guddiga Farsamada doorashooyinka?
Jubbaland oo digniin adag kasoo saartay falal kufsiga
Taiwan oo dacwad ku oogtay Nin bixiyay Amar lagu toogtay rag Soomaali ah
Dagaal ka dhacay G/Baay & Dowladda Soomaaliya oo guulo ka sheegatay
Shirkaan oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaraddaha qorsheynta Qaranka iyo maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Maalintii labaad ka socda Magaalada muqdisho, waxaana xoogga lagu...